SomaliTalk.com » 2014 » April
Home » Archive Bisha April, 2014
Dawladda Itoobiya ayaa cunaqabateyn ku haysa Saxaafada waxayna si ula kac ah u xidhaa meelaha ay saxaafadu ka dhaq-dhaqaado sida caasimada Itoobiya ee Addis Abab. Dalka intiisa kale way ku yartahay saxaafada xorta ah waxaana meelaha qaar ka dhaq-dhaqaaqa Saxaafada ay ayadu gacanta ku hayso oo waxa ay doonayso Dawladda Itoobiya moyaane aan wax kale qori karin. Guud ahaan Gobalka Ogaadeenya kama jirto...
Kuala Lumpur, April 27, 2014- Waxaa si rasmi ah xarigga looga jaray dhismaha cusub ee Safaaradda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ay ku shaqeyn doonto , kaasoo ku yaala Magaalada Kuala Lumpur ee Caasimadda dalka Malaysia dalka, waxaana xafladda lagu furayay dhismaha cusub ka soo qeyb galay qeybaha kala duwan ee bulshada Soomaaliyeed ee ku nool dalkaasi . Xafladda oo si heersare ah loo agaasimaya...
Muqdisho, —Golaha Wasiirada ee Xukuumadda Federaalka Soomaaliya ayaa galabta isugu yimid kulan aan caadi ahayn, waxaana kulanka shir guddoominayay Ra’iisul Wasaaraha ku xigeenka ahna Wasiirka Diinta iyo Awqaafta mudane Ridwaan Maxamed Xirsi. Kulanka ayaa looga hadlay Wadooyinka Xiran, Xariga lagu hayo dadka Soomaaliyeed ee ku sugan Nairobi, iyo Xarigii loo gaystay xalay Qunsulka Soomaaliya...
Masaajid iyo Xarun waxbarasho laga furay magaalada Västerås, Sweden
Hordhac Magaalada Västerås waxaa ay saacad u jirtaa caasimada dalka Sweden ee Stockholm. Magaalada oo ay degan yihiin ilaa 150 kun oo qof ayaa ah magaalada shanaad ee ugu weyn sweden. Waa magaalo taariikhi ah, kana mid ah magaalooyinkii ugu horeeyey ee ay dadka ajaaniibtu soo degeen. Ajaaniibtii ugu horeeyey ee magaaladan soo degey ayaa ahaa kuwo u dhashay dalka Talyaaniga iyo Turkiga. Balse laga...
Kulan aad iyo aad u ballaaran oo si heer sare ah loo soo agaasimay laguna taageerayey joojinta qaadka ayaa maanta oo Khamiis aheyd 24.04.2014 lagu qabtay magaalada Leicester. Kulnkaas waxaa si wadajir ah usoo wada qaban qaabiyey dhammaan jaaliyadda reer Leicester oo aan kala harin. Waxaa kaloo kulankaas lagu soo casumay halyeeyga aalaaba u ololeeya joojinta qaadka Abuukar cawaale. Ugu horeyn kulankaas...
Muqdisho, — Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka ee Soomaaliya Mudane Cabdiweli sheekh Axmed Maxamed ayaa maanta shir guddoomiyey kulanka joogtada ah ee golaha wasiirada Xukuumadda Federaalka Soomaaliya, kaasi oo looga hadlay ansixinta guddoomiyaha bangiga dhexe iyo ku-xigeenkiisa. Golaha ayaa sidoo kale ka hadlay maamul u samaynta gobolada iyo degmooyinka dalka, iyadoo arrintaasi go’aan...
Muqdisho, – Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka ee Soomaaliya Mudane Cabdiweli sheekh Axmed Maxamed ayaa maanta shir guddoomiyey kulan aan caadi ahayn oo Golaha Wasiirada Xukuumadda Federaalka Soomaaliya ka yeeshay samaynta maamul goboleedyada dalka. Golaha ayaa dood dheer ka yeeshay muhiimadda ay leedahay in si waafaqsan dastuurka iyo shuruucda dalka loo sameeyo maamulada gobolada, gaar...
iyo Mid ka mid ah Shaqaalaha Idaacada Dalsan oo lagu diley Muqdisho … Waxaa Goor Dhow uu Dil uu ka dhacay Degmada Dharkeenleey ee Gobolka Banaadir , waxaana Dilkaas loo geystey Xildhibaan ka tirsan Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya oo lagu Magacaabo Cabdicasiis Isaaq Mursal waxaana la sheegey in dilkaas uu ka dhacay meel ku dhow Guriga Xildhibaanka ee Degmada Dharkeenleey Waxaa Goobta...
Qarax Goor dhow ka dhacay Muqdisho oo lagu Diley Xildhibaan ka tirsan Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya
Wxaa Goor Dhow uu Qarax uu ka dhacay Degmada Xamar ee Gobolka Banaadir , waxaana Qaraxaas lala beegsdey Gaari uu Watey Xildhibaan ka tirsan Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya oo lagu Magcaabo Isaaq Maxamed Cali (Rino), waxaana la sheegey In Qarax uu ahaa mid lagu soo rakibey Gaariga Xildhibaanka Warka waxaa uu intaa ku daryaa in Qaraxaasi uu ku Geeriyoodey Xildhibaan Isaaq Maxamed Cali (Rino) iyadoo...
IGAD oo ku Hanjabey in Ciddii hor istaagto Dadaalka uu Wado Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya Maxkamad la soo taagi doono .
Iyadoo Dhawaan la soo afmeerey safar oo uu ra’iisul wasaaraha Soomaaliya ku joogay magaalada Kismaayo ayaa arrimaha shirkii dib u heshiisiinta Maamulka Jubooyinka ayaa waxaa arrintaa ka hadlay Ergeyga Urur Goboleedka IGAD u qaabilsan Soomaaliya Maxamed Cabdi Afey. Ergeyga ayaa sheegey in ay diyaar u yihiin dhaqan gelinta heshiiskii Adis Ababa isla markaana ayan u dul qaadanayn in la carqaladeeyo...
Walaalyaal waad salaamantihiin dhamaantiin. Qoraalkan iyo qoraalo kale oo aan horay uqoray waxaa igu dhaliyey su’aalo badan oo ay isoo weydiyeen walaala Soomaaliyeed oo kunool wadamada galbeed kuwaas oo quud daraynaya warbixin kusaabsan Qatar ee laxariira arimaha qoyska. Sidaad ogtihiin dadkii ubaxsaday wadamada galbeedka waa qax markale oo waxaa kufurantay colaad nooc kale ah oo laxariirta caruurta...
Dowladda Imaaraadka Carabta oo Qalab ugu Deeqday Ciidamada Ammaanka Soomaaliya
Dowladda Imaaraadka Carabta ayaa Qalab fara badan oo kala gedisan manta ugu Deeqday Ciidammada Amaanka Qaranka Soomaliyeed. Deeqdan oo isugu jirata; dareyska Ciidamada iyo Gaadiid ayaa waxa Safiirka Dowladda Imaaraadka Carabta u fadhiya Soomaliyaa uu ku wareejiyay Dowlada Soomaaliya. Safiirka dowlada imaaraatka carabta Ambasador Maxamed Al-Cuthmaan oo ka hadlay xafladdii Guddoonsiinta Deeqda ayaa...
Nadwado Cilmiyeedii 12aad Ee Ka socotay Boosaaso oo lasoo Gunaanaday iyo Bayaan Kasoo Baxay:
Waxaa lagusoo gaba gabeeyay Majidka wayn ee Al Rawda ee Magaalada Bosaso Nadwadii kasocotay oo ahayd Nadwadii 12aad ee lagu qabto Bosaso Halkan ka akhriso Bayaanka ka soo baxay nadwada Mawduuceeduna uu ahaa (أعمال القلوب) , iyadoo intay socotay laga soo jeediyay Duruus aad u qiima badan oo ay ka qayb qaateen Culimo kala duwan. Darsigii ugu danbeeyay ee lagasoo jeediyo Masjidka Al Rawada...
10 kii sano ee ugu horaysay Waaxdii Nabad Sugiddii NSS waxay qaadday tallaabooyin ay kula baratantay laamaha asaageed ah ee dunida ka jira , adeegsiga magacyada qarsoon , dhex galidda xundumaha Dawladaha aan cadawga nahay , ayadoo la marayo hanaan fahamkiisu ku adag tahay qofka caadiga ah , waxay laantu dhex istaagtay xafiisyada Itoobiya oo Gumaysata dhulka Soomaaliyeed qayb ka mid ah ayadoo adeegsanaysa...
Warsaxaafadeed ka soo baxay Dawladda Federaalka Soomaaliya ayaa tibaaxay “Muwaadiniintani oo ku yimid Muqdisho duulimaadkii labaad oo dad Soomaaliyeed looga soo daabulo dalka Kenya”.. Warsaxaafadeedka oo dhan hoos ka akhri… Buri’ Hamza oo ku soo dhoweeyay Muqdisho duulimaadkii labaad muwaadiniin Soomaaliyeed oo laga soo daad gureeyay Nairobi . Mogadishu, – Wasiiru dowlaha...
Inta aanan guda gelin cinwaanka qormadan oo ah “Luuqadda Soomaaliga ma mari doontaa wadadii ay ku dhinteen luuqado badan oo ka horeeyay?”, marka hore bal aan dul istaago in aan si kooban wax uga iraahdo waxa ay luuqadi tahay, halka ay luuqadda Soomaaliga kasoo jeedo, kuwa ay yihiin luuqadaha ay isku bahda yihiin, iyo waliba gobolada looga kala hadlo luuqadahaasi. Luuqadi maxay tahay? Luuqad waxaa...
Bannaanbaxyada looga soo horjeedo dhacdada foosha xun ee Kenya kula dhaqantay Qaxootiga Soomaaliyeed ee dalkeeda ku sugan
Videoga hoose waa Somalida Minnesota iyo siday uga horyimaadeen dhibaatada Kenya ku hayso dadka Soomaaliyeed. Mudaharaadkan murtidiisu waxay ahayd in Kenya fariin loodiro in ku khaldantahay ficilkeeda qaanuuniyan, iyo caqliyan. Sidoo kale mushtamaca Somaliga ee dhiban in aan cod u noqono gaar ahaan, kuwa ku jira Kasarani Camp. Videoga hoose Barnaamij qiiro leh oo Somali Channel kameeyeen dhacdada...
Warsaxaafadeed: Ra’iisul Wasaare Cabdiweli “Haweenka Jubbooyinka waa inay hormuud u noqdaan dib u heshiisiinta iyo horumarinta”
Kismaayo, -Ra’iisul Wasaaraha Xukuumada Federaalka Soomaaliya Mudane Cabdiweli Sheekh Axmed Maxamed iyo wafdi uu hogaaminayo oo maalintii saddexaad howlo shaqo u jooga magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbadda Hoose ayaa waxa uu kulamo kala duwan la qaadanayaa qeybaha kala duwan ee bulshada gobolada Jubbooyinka iyo Gedo. Ra’iisul Wasaaraha ayaa ugu horeyntii la kulmay odayaasha dhaqanka...